Kutuswe iqhaza labafundi abadala basePhangindawo Primary – Sivubela intuthuko Newspaper
Kutuswe iqhaza labafundi abadala basePhangindawo Primary
LABA ngabafundi basePhangindawo abebenikelelwa ngomfaniswano ngaboBumbano Lwethu.
BACHONYWE uphaphe legwalagwala abafundi abadala basePhangindawo Primary School eMkhambathini ngokubheka emuva bazobonelela ngemifaniswano abafundi abahlwempu ngaphansi kwenhlangano yabo abayisungulile ebizwa ngoBumbano Lwethu.
UBumbano Lwethu luhambele kulesi sikole luyonikela ngomfaniswano kubafundi abangu-15 abahlonzwe njengabaphuma emakhaya ahlwempu.
UMnu Sphiwe Ngidi okhulumela UBumbano Lwethu futhi oyikhansela laka-ward 2 kuMasipala waseMkhambathini uthe lokhu abakwenzile kuyizindlela zokubuyisela okuhle emphakathini nokunikeza abafundi ithemba lokufezekisa amaphupho abo. Uthe lesi sikole iPhangindawo bakholwa wukuthi yiyona eyacaba indlela yabo yababeka lapho bekhona namhlanje. “Nginxusa abazali ukukhulisa izingane ngendlela efanele abayakujabulisa uma sezikhulile. Lokhu esikwenza namhlanje kungukulekelela umphakathi esikhule kuwona ngokuthi nathi siziveze ukuthi sikhona futhi sinawo. Siyafisa ukukhula kule nhlangano yethu senze nokukhulu okudlula lokhu esikwenza namhlanje,” kusho ikhansela uMnu Ngidi.
UMnu Siyabonga Ngubane onguthishanhloko kulesi sikole utuse ukuzinikela kwalaba bafundi okuyimanje benza imisebenzi emqoka emphakathini ngokungakhohlwa lapho bephuma khona. Uthe uyakholwa wukuthi nabazali babafundi bazokwehlelwa wumthwalo wokufunela izingane zabo umfaniswano futhi uzokhulula nalabo abadonsa kanzima ekukhuliseni izingane zabo. “Bukhulu ubunzima esibhekene nabo singothisha njengoba ngesinye isikhathi uye uphume wonakalelwe wumoya ngenxa yesimo sezinye izingane esizifica emakilasini zisesimweni esingagculisi ngomfaniswano. Ebusika kuba nzima kakhulu ngoba uye ufice omunye egodola engenalo ijezi eqhuqhwa ngamakhaza. Zonke lezi zinto ziyasikhathaza singothisha futhi ziletha ingcindezi nakithina,” usho kanje.
Umfundi u-Aphiwe Ngidi (11) ubongele ozakwabo ahlomule nabo ngomfaniswano ethi uyazi ukuthi nabazali babo bazojabula uma bebabona begqoke sebefana nabanye abafundi. Uthe isifiso sakhe ngukuba wudokotela ngoba unothando lokunakekela abagulayo.